Mogadishu Journal » 2019 » May » 21
Mjournal ;-Dowladda Kenya ayaa markii u horreysay ka hadashay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda oo wasiir iyo xildhibaanno ay ku jireen oo loo diidday dal ku galka dalkaas, xalayna ku baryay garoonka diyaaradaha ee Nairobi. Waxa dhaliyay iyo mas’uuliyiinta ay dib ugu...
Mjournal :-Xildhibaanadda laga soo doorto gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, Ilhaan Cumar, ayaa Aqalka Congress-ka geysay hindise sharciyeed difaacaya xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda. Ilhan Cumar ayaa dooneysa in arrimaha socdaalka laga hor istaago qof kasta oo...
Opportunities for Peace in Kismayo, Somalia, is the latest in our series of ‘Local Voices for Peace’ reports, the aim of which is to raise the profile of civil society perspectives on peace and conflict. Opportunities for Peace in Kismayo, Somalia, is the latest in our series ...
Mjournal ;-Wararka ka imanaya magaalada Nairobi ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay gudaha u galeen qaar ka mid ah xafiisyada shirkaddaha xawaadaha Soomaalida ee ku yaalla xaafadda Islii. Xoghayaha guddiga ganacsatada Soomaalida Islii, Cumar Axmed Nuux ayaa goor dhaweyd VOA u...
Mjournal :-Madaxweyne ku-xigeenka 1-aad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay darbiga ay dowladda Kenya ka dhiseyso xadka ay la wadaagto Soomaaliya gaar ahaan dhinaca Balad-Xaawo. Madaxweyne kuxigeenka oo ku sugan degmada...
Tahriibayaal ay Soomaali ku jiraan oo laga soo badbaadiyey Xeebaha Jabuuti
Mjournal :-Ciidamada Ilaalada Xeebaha dalka Jabuuti ayaa ku guuleystay inay soo badbaadiyaan 120 Muhaajiriin ay Soomaali ku jiraan, Xilli ay Ciidamadu ku jireen howlahooda Shaqo. Muhaajiriinta la soo badbaadiyey ayaa Saraakiil Ciidan waxa ay sheegeen inay u kala dhasheen dalalka,...
Maxaa lagu micneyn karaan tallaabada ay Kenya ku xanibtay Wasiirada iyo Xildhibaannada?
Mjournal :-Dowladda Kenya ayaa dal ku gal u diidey xildhibaanno iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaas oo muddo saacado ah ku xannibnaa garoon ku yaalla Kenya, sida ay ila wareedyo u xaqiijiyeen. Wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka...
Masuuliyiintii dowladda ee ku xanibnaa Garoonka Jomo Kenyatta oo Muqdisho lagu soo celiyay
Mjournal :-Waxaa saaka Magaalada Muqdisho dib loogu soo celiyay Wasiir Ku xigeen ka tirsan Xukuumadda Somaliya & laba Senator oo Aqalka Sare ka mid ah, kadib muddo 15-saacadood oo ay ku xanibnaayeen Garoonka Diyaaradaha Jomo Kenyatta ee dalka Kenya. Dowladda Kenya ayaa...
Mjournal :-Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ay ka baxeen Garoonka Diyaaradaha Magaaladaas. Ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo iyana ka mid ah howlgalka AMISOM ayaa lagu soo...
Mjournal :-Dowladda Kenya ayaa dal ku gal u diidey xildhibaanno iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaalaiya, kuwas oo muddo saacado ah ku xannibnaa garoon ku yaalla Kenya, sida ay ila wareedyo u sheegeen VOA. Wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka...